Codsiyada Xiran booska: Isuduwaha Isgaarsiinta - Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > Maxaa kucusub CIRC > Codsiyada Xidhan booska: Isuduwaha Isgaadhsiinta
Mar dambe ma aqbalayno codsiyada cusub ee booska Isuduwaha Isgaarsiinta.
Isuduwaha Xiriirinta Sharaxaada shaqada:
Doorarka Gaarka ah iyo Mas'uuliyadaha
La shaqee Kooxaha Abaabulka iyo Horumarinta si loo waafajiyo wax ku oolka, kalifaya
isgaarsiinta abaabulka iyo ololeynta lacag ururinta.
La shaqee Kooxda Abaabulka iyo Maareeyaha Isgaarsiinta si loo qorsheeyo loona fududeeyo tababarka ku saabsan isgaarsiinta iyo farriinta xubnaha.
La horumariyo agabyada wacyigalinta waxbarashada / u doodista si loogula xiriiro ololaha, la wadaagga iyo macluumaadka isbahaysiga xubnaha, taageerayaasha iyo deeq-bixiyeyaasha.
Qabyo cusboonaysiinta joogtada ah ee xubinnimada.
Taageer ololeyaasha sharci dejinta, kiisaska iska caabinta tarxiilka iyo dadaallada kale ee abaabulka adoo diyaarinaya luqadda, abuurista codsiyo, ku dhiirrigelinaya ololeyaasha emaylka iyo warbaahinta bulshada, iwm.
In lala kaashado kooxda horumarinta si loo fududeeyo soo ururinta iyo adeegsiga sheekooyinka dadka ay saameeyeen shaqada CIRC (warbaahinta iyo xaaladaha lacag uruurinta) anshax ahaan, awoodsiin
Maamul jawaabta degdegga ah ee warbaahinta, oo ay ku jiraan qoritaanka war-saxaafadeedyada, qodobbada hadalka, iyo warbaahinta
fariinta iyo isku dubaridka wareysiyada warbaahinta markii loo baahdo
Ka caawi xagga qorsheynta, saadka, iyo diyaarinta xubnaha kale ee CIRC shirarka jaraa'id.
Isku-dubbarid waxyaabaha ku jira bogga, e-qaraxyada iyo ololeyaasha macluumaadka. Maamul bulshada CIRC
Abuur waraaqo, jaantusyada, sawirrada, fiidiyowyada, iwm si loo taageero kaabayaasha isgaarsiinta
Lacag ururin iyo taageero dhacdooyin
Ka caawi kooxda horumarinta xirfadaha luqadda codsiyada deeq-bixiyeyaasha
Abuur alaab xayeysiin ah oo lacag ururin ama dhacdooyin kale ah
Sii taageero dhacdooyin kaladuwan, oo ay ku jiri karaan sawir qaadid, toos u socosho, iwm
Dhammaan shaqaalaha waxaa laga filayaa inay noqdaan kaqeybgalayaasha firfircoon ee CIRC ee ka hortagga cabudhinta iyo ka mid noqoshada bulshada si ay uga shaqeeyaan dhaqan urur oo ka tarjumaya qiyamka iyo mabaadi'da aan ugu dagaallameyno adduunka.
Isuduwaha Isgaarsiinta waa inuu ku noolaadaa ama diyaar u yahay inuu u guuro Colorado. Ku noolaanshaha Denver looma baahna, laakiin ka-soo-qaybgal shaqsi ahaaneed ee lacag-ururinta ku saleysan Denver, saxaafadda, ama munaasabadaha mudaaharaadka ayaa loo baahan doonaa. Waxaan rajeyneynaa dhacdooyinka sidan oo kale ah inay dhacaan 3-5 jeer bishiiba.
Taariikhda bilaabaneysa 5ta Luulyo, 2021
Mawqifkani waa mid joogto ah, waqti buuxa ah, oo ay kormeerayaan isgaarsiinta
Mushaharka iyo faa'iidooyinka:
Ry Mushaharku waa $ 46,500, oo la kordhin karo sida miisaaniyadda iyo qaab-dhismeedka mushaharku u oggol yihiin
○ Qiimaha ku noolaanshaha ee ku saabsan sanadguurada taariikhda kiradaada
In Caymiska Caafimaadka oo bilaabmaya maalinta 1aad ee bisha shaqaalayntaada kadib. Aragtida iyo
caymiska ilkaha waxaa la bixiyaa 3 bilood kadib.
Xirfad muujiye ahaan qoraa ahaan. Khibrad hore ee isgaarsiinta warbaahinta,
gaar ahaan diyaarinta warsaxaafadeedyada, latalinta warbaahinta, iyo qodobada hadalka oo lagu daray.
Ku fiicnaaday Isbaanish qoran iyo kuhadal
Xirfadaha xalinta dhibaatooyinka adag iyo kartida aad ugu shaqeyn karto si madax banaan
Si aad u dalbato, fadlan emayl u soo dir jobs@coloradoimmigrant.org oo leh resume, warqad dabool ah,
iyo 2-3 muunad qoraal ah * illaa Juun 11.
* Ugu yaraan hal muunad qoraal waa inuu ku ahaadaa Ingiriis.
Haddii aad wax su'aalo ah ama walaac ah qabtid, fadlan la xiriir emily@coloradoimmigrant.org ama wac kooxda isgaarsiinta lambarkan 720-295-4749
Waxaa naga go'an inaan u dagaallano aragtida caddaaladda oo saldhig u ah baahiyaha iyo khibradda
BIPOC, soo galootiga, iyo LGBTQ + folks, iyo sidoo kale kooxaha kale ee la hayb sooco. Sidaas awgeed waan jeclaan lahayn
in si xoog leh loogu dhiirrigeliyo dadka isu aqoonsanaya inay xubin ka yihiin mid ka mid ah beelahan inay codsadaan.